डिजिटल गाउँपालिकातर्फ याङवरक « Mechipost.com
डिजिटल गाउँपालिकातर्फ याङवरक
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:३७
इन्टरनेट र पर्याप्त सामग्री ब्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण
पाँचथर । गाउँपालिकाअन्तर्गतका सेवा प्रवाहलाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा लगेर पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाले डिजिटल गाउँपालिका निर्माणको अभियानलाई मूर्त रुप दिँदै लगेको छ ।
गाउँपालिकाले विभिन्न १० वटा सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजादै डिजिटल गाउँपालिका निर्माणको आधार तयार पारेको हो । भौगोलिक कठिनाई, इन्टरनेटको कमजोर पहुँच, विद्युतीय सामग्री ब्यवस्थापन अभाव तथा दक्ष प्रविधिमैत्री जनशक्ति अभाव जस्ता समस्यालाई समेत सुल्झाई डिजिटल गाउँपालिका निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिन लागेको हो । जसअनुसार गाउँपालिकामा कार्यालयको आन्तरिक प्रणाली, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले अनिवार्यता पाउन थालेको छ ।
यो गाउँपालिकाले ०७४ बाटै ब्यक्तिगत घटना दर्तालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । याङवरक २०७४ माघ २९ गते मुलुकको सातौँ अनलाइन घटना दर्ता गाउँपालिका घोषित भएको थियो । सोही समयदेखि नै गाउँपालिकाका छ वटै वडाबाट ब्यक्तिगत घटना दर्तालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन बनाइएको गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर गणेश खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ । वडा नं. ४, ५ र ६ मा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को दोश्रो चौमासिकबाट उक्त प्रणाली लागू गरिएकामा बाँकी तीन वटा वडामा चालु चौमासिकमा लागू गरिएको हो । गाउँपालिकाको विद्युतीय सेवा प्रणाली कार्यान्वयन रणनीतिअनुसार याङवरक–४ थर्पूमा रहेको सिभिल बैङ्कको शाखासँग गाउँपालिकाले बैङ्किङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु मध्ये करीब ९८ प्रतिशतको बैङ्क खाता सञ्चालनमा आएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोहिणी आचार्यका अनुसार बैङ्कले वडाहरुमा भत्ता वितरण शिविर सञ्चालन गर्नेछ । यसका लागि गाउँपालिकाको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । शिविरमा भत्ता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिहरु उपस्थित हुन नसके इच्छाइएको ब्यक्तिले भत्ता बुझ्न सक्नेछन् ।
याङवरकमा बर्थ रजिष्ट्रेसन सिस्टम (बीआरएस) अर्थात अनलाइन जन्म दर्ता प्रणाली पनि लागू भएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएका बच्चाहरुको जन्मसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा अनलाइन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिइन्छ । बच्चा जन्मेपछि जन्मको तथा आमाबावुको विवरण भर्ने गरिन्छ । उक्त विवरण पूरा भएपछि उक्त बच्चाले एउटा नम्बर प्राप्त गर्दछ । त्यहि नम्बरका आधारमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ ।
राष्ट्रिय परिचपयत्र कार्यान्वनयनमा आएपछि बीआरएस प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्ने देखिएपनि याङवरकले गत साउनबाट उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । याङवरकमा रहेका पाँच वटा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर रहेको र यी सबै स्थानमा बीआरएस प्रणाली लागू भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
राजश्व सङ्कलन बढाउने तथा चुहावट रोक्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले राजश्व सङ्कलनको कामलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । गाउँपालिकाभित्र राजश्व सङ्कलनका लागि हुने सबै कामको विवरण अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गरिन्छ । राजश्वयोग्य प्रत्येक दर्ता चलानीबारे सफ्टवेयरमा अपलोट गर्ने वित्तिकै राजश्व दाखिलासम्बन्धी जानकारी सफ्टवेयरमा सुरक्षित हुन्छ र त्यो संशोधन गर्न मिल्दैन ।
आफ्नै खर्चमा सफ्टवेयर निर्माण गरी गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गाउँपालिका प्रशासनले दैनिक राजश्व सङ्कलनको अवस्था थाहा पाउन सक्ने कम्प्युटर अपरेटर खतिवडाको भनाई छ । यो प्रणाली गत साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।
गाउँपालिकाले जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र तथा अपाङ्गता परिचयपत्र समेत अनलाइन प्रणालीबाटै तयार पार्ने गरेको छ । गाउँपालिकाको सफ्टवेयरमा दर्ता भएपछि परिचयपत्र छपाई हुनुका साथै उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण यहाँ रहन्छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको अपाङ्गत समन्वय समितिको सिफारिसपछि अपाङ्गता परिचयपत्र तयार हुन्छ भने जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र सम्बन्धीत सेवाग्राहीको निवेदनपछि तयार हुन्छ ।
याङवरक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल सूचना पार्टी राखिएको छ । गत चैतबाट सञ्चालनमा आएको उक्त सूचना पार्टीमा गाउँपालिकासँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण जानकारीमुलक विवरणहरु, गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सेवा दिने इकाई तथा कर्मचारी, गुनासो राख्ने स्थान तथा कर्मचारी लगायत विस्तृत विवरण राखिएको छ ।
गाउँपालिकाको मुख्य चापको रुपमा रहने विकास निर्माणका योजना सञ्चालनका कार्यालयीय कामलाई अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यका अनुसार उपभोक्ता समितिको विवरणहरु, वडाले उपभोक्ता समितिलाई दिने सम्झौतासम्बन्धी सिफारिस, गाउँपालिकाको योजना शाखाले उठाउने टिप्पणी, योजना सञ्चालन कार्यादेश, पेश्की दिनुपर्ने भएको सोको टिप्पणी, पेश्कीको पत्र, रनिङ विलहरु लगायत सबै कुरा सफ्टवेयरमा दर्ता हुन्छन् ।
यसले योजनाहरुको प्रगति थाहा पाउन, रिपोर्टिङ गर्न र कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई कामको लोड कम गर्न मद्दत गर्दछ । योजनाको एक प्रकृया पूरा भएपछि अर्को प्रकृयामा जान सफ्टवेयरले मद्दत गर्ने कम्प्युटर अपरेटर खतिवडाको भनाई छ ।
गाउँपालिकाले गाउँपालिकाअन्तर्गतका निकायहरुमा इ–हाजिरीलाई विस्तार गर्दै लगेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरु र सात वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इ–हाजिरी सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै १८ वटा विद्यालयमा इ–हाजिरी सञ्चालनमा आएको र निरन्तर विस्तारको क्रममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै गाउँपालिकाले मातहतका निकायमा अनलाइन पत्राचार प्रणाली र ग्रूप एसएमएस प्रणाली लागू गरेको छ ।
अनावाश्यक पत्र लेख्ने, पु¥याउने झण्झटबाट मुक्त हुन उक्त प्रणाली सहयोगीसिद्ध भएको कम्प्युटर अपरेटर खतिवडाले वताउनुभयो । याङवरकमा कर्मचारी अभिलेख सूचना प्रणाली समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कर्मचारीका पूर्ण विवरण राखी नियुक्तिदेखि अवकाससम्मको विस्तृत विवरण अनलाइन प्रणालीमा सुरक्षित गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले विद्यालय सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त सफ्टवेयर आगामी तिहारसम्ममा कार्यान्वयनमा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालय सफ्टवेयरमा विद्यालयका सम्पूर्ण प्रशासनिक कागजात, विद्यार्थीसम्बन्धी विवरणहरु, लब्धाङ्कपत्र लगायत कागजातहरु राखिनेछन् । यसले विद्यालय प्रशासन र गाउँपालिकाको शिक्षा शाखालाई काम गर्न सहज बनाउने आचार्यको भनाई छ ।
गाउँपालिकाले प्राविधिक स्टिमेट र विलिङलाई अनलाइन बनाउने प्रणालीको खोजी सुरु गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यका अनुसार प्रत्येक योजनाहरुको प्राविधिक स्टिमेट तयार भएपछि त्यसलाई अनलाइनमा राख्ने र त्यसैका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने कुराले अनावाश्यक विवाद उत्पन्न हुने, योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ । “यससम्बन्धी सफ्टवेयरको खोजीमा छौँ । प्राप्त भए प्रयोगमा ल्याउछौँ”, आचार्यले भन्नुभयो ।
दश वटा अनलाइन प्रणालीहरु लागू भएपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरतामा गाउँपालिकाले ठूलै चुनौति झेल्दै आएको छ । याङवरक एडिएसएल, सुविसु, वल्र्डलिङ्क र टेकमाइन्ड इन्टरनेट जडान गरिएका छन् । भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै पनि सेवा प्रदायकको सेवा प्रभावकारी र नियमित नहुँदा सेवाग्राहीले मार भोग्नु परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यको भनाई छ ।
“अनलाइन प्रणालीमा गएपनि इन्टरनेटले राम्रोसँग काम नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था छ”, आचार्यले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रा सबै जनशक्तिलाई अनलाइन फलो गर्न तत्पर र सक्षम बनाउनुपर्ने बाध्यता समेत छ ।” गाउँ कार्यपालिको कार्यालयमा यन्त्र उपकरणको समस्या नभएपनि वडा कार्यालयहरुमा प¥याप्त उपकरण नहुँदा एउटामा समस्या आए वैकल्पिक प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन् । इन्टरनेट, जनशक्ति र उपकरणलाई क्रमश सवल बनाइने आचार्यले वताउनुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङ डिजिटल गाउँपालिका निर्माणको अभियान रफ्तारमा अगाडि बढेपनि अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, इन्टरनेट सेवाको पहुँच वडा नं. १, २ र ३ मा विस्तार गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुने वताउनुभयो । उहाँले चुनौतिहरु रहेपनि डिजिटल गाउँपालिका निर्माणको अभियान अघि बढिरहने वताउनुभयो ।
याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले डिजिटल गाउँपालिका निर्माणका लागि गाउँपालिका अन्तर्गतका सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने काम हेर्दा सामान्य देखिएपनि निकै कठीन र महत्वपूर्ण रहेको वताउनुभयो । उहाँले समयानुकूल सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तथा त्यसका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति थप्दै लगिने वताउनुभयो ।